काखी, घाँटी, कुइना कालो भएर लज्जीत हुनुहुन्छ ? अब यसो गर्नु होस्, पाउनुहुनेछ गोरोपना – Sandes Post
May 1, 2022 1419
काठमाडौँ । कुहिना , घाँटी , घुँडा र काखी कालो हुने कारणले गर्दा धेरै मानिसहरु यसलाई देखाउन लाज मान्ने गर्छन । विभिन्न कारणहरुले गर्दा शरीरका यी भागहरु कालो हुने गर्छ । मानिसहरु यस समस्याबाट छुट्कारा पाउनको लागि विभिन्न किसीमका प्रयासहरु गर्ने गर्छन् । यसलाई छिट्टै हटाउनको लागि निम्न उपायहरुलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ ।काखीलाई कालो हुन नदिने उपायहरु
Posted in Intresting, News
Prevटेलिकमको नयाँ अफर, ४९ रूपैयाँमा अनलिमिटेड डेटा र भ्वाइस कल सुविधा
Nextकठै!! उपचार गर्न लगेको छोरा आमाको आँखा अघिबाटै हराएपछि, आमाको रुवा बासी, हेर्नुहोस भिडियो
नायिका बर्षा सिवाकोटीले आज बिहे गर्न लागेका युवा के गर्छन ?